Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha IR Beam Counter-ka - Shiinaha Warshad Counter IR IR
MRB Automatic people counter sensor HPC005S (nooca toos-u-gelinta) Si ka duwan HPC005, HPC005S otomaatikada dadka otomaatigga ah waxay u gudbin karaan xogta daruur la'aan PC-ga. Kani waa miiska dadka otomaatiga ku shaqeeya ee bilaa otomaatigga ah oo lagu gudbin karo WIFI la'aan, Qaar badan oo ka mid ah dadkayaga otomaatigga ah waa alaab shati leh Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan miiska dadka otomaatiga ah. Gudaha ...
Kani waa miis albaab aad ufudud oo ku shaqeeya kaliya batari. Qaar badan oo ka mid ah xisaabiyeyaasha albaabkeena ayaa ah alaab sharciyeysan. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan albaabadeena albaabkeena. Tirada qulqulka rakaabka ayaa hada ah hogaamiyaha ugu weyn suuqa. Iyada oo ay saameyn ku leedahay juqraafi ahaan deegaanka, deegaanka, taraafikada iyo arrimo kale, falanqaynta iyo tirakoobka tirada passeng ...
Miiska taraafikada tafaariiqda MRB ee loogu talagalay dadka tafaariiqda ee tirinaya HPC002
Kani waa miiska taraafikada tafaariiqda oo lagu xoojin karo batteriga iyo awoodda labadaba. Qaar badan oo naga mid ah taraafikada tafaariiqda ayaa ah badeecooyin shatiyeysan. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan meheradda taraafikada tafaariiqda. Tirada qulqulka rakaabka ayaa tilmaame muhiim ah u ah howlaha dukaanka suuqa. Hawlgallada maalinlaha ah, waxaan si toos ah u xukumi karnaa tayada howlaha bakhaarka ee suuqa ...
Kani waa makiinad tirinta dadka oo raqiis ah. Qaar badan oo ka mid ah dareemayaashayada tirinta aadanaha waa alaabo shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dareemaheena tirinta aadanaha. Qiimaha rakibida ee HPC015U dareeraha tirinta bini'aadamka ayaa aad u hooseeya, iyada oo aan la dhisin wax dhisme ah, rakibo deg deg ah, oo aad ugu habboon xarunta weyn ee qaabka silsiladda si loo sameeyo bini'aadam sax ah ...
Qaar badan oo ka mid ah miiskeena cagaheena waa alaabooyin gaar loo leeyahay. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan miiskeena caga dhigista. Waxaan u adeegsanaa dareemahan miisaanka lugta si aan u siino xalinta tirinta cagtooda fududahay oo fudud oo wax ku ool ah maktabado badan, matxafyada, goobaha qurxinta leh, dukaamada silsiladaha, dukaamada waaweyn, iyo meelaha kale ee dalka iyo dibaddaba. Miiskan caga-dhigashada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa otomaatiga ...
Kani waa miiska fudud ee dadka dijitaalka ah ee dijitaalka ah ee xogta ku dhoofin kara USB, Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena dijitaalka ah ayaa ah alaab sharciyeysan Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xisaabaadka dadkeena dijitaalka ah. Maamulka sayniska ee suuqa casriga ah wuxuu ku tiirsan yahay xogta inuu ku hadlo. Xog sax ah ayaa u oggolaaneysa kuwa wax fuliya inay fahmaan macluumaadka iyo xogta saxda ah markii ugu horreysay, waxayna sameyn karaan ...
Kani waa miiska dadka aan fiilooyinka lahayn oo lagu gudbin karo WIFI la'aan, Qaar badan oo dadkeenna ka mid ah ayaa ah alaab shati leh Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan miiska dadkeenna. Xilliga xogta weyn, Dadku waxay ka dhigayaan xogta mid sax ah oo ganacsiga ka dhigaysa mid fudud. Kaarka infrared-ka wuxuu ku habboon yahay maktabadaha, saldhigyada tareenka dheereeya, dukaamada taleefanka gacanta, sumadda tayada ...